ယောဟန်အောင်: မြန်မာ့ဂီတ စုစည်းမှုကလေး (ကိုဟန်ထွန်း)
မြန်မာ့ဂီတ စုစည်းမှုကလေး (ကိုဟန်ထွန်း)
ကျနော်တွေ့လိုက်ရတော့ ဖန်တီးထားသူကို တကယ်ပဲ ချီးကျူးမိပါတယ်။ မြန်မာသီချင်း၊ ဂီတတွေနဲ့ အခြားရုပ်ပုံ တွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ပြီး ဆက်ထားလိုက်တာ။ တကယ့် သဘောကျစရာပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့လည်း ကြည့်ပြီးပြီ ထင်ပါတယ်။ မနေနိုင်လွန်းလို့ ထပ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Yaw Han Aung at 7:49 AM
Labels: ဗီဒီယို, သီချင်းများ
Wow. I love this, man!
The creator is so inspirational...
And you are also smart to find this kind of video on youtube.
Haha. Post more, Bro!